Broken jaw (မေးရိုးကျိုးခြင်း၊ မေးရိုးပြုတ်ခြင်း) - Hello Sayarwon
Broken jaw (မေးရိုးကျိုးခြင်း၊ မေးရိုးပြုတ်ခြင်း)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » Health A-Z » Broken jaw (မေးရိုးကျိုးခြင်း၊ မေးရိုးပြုတ်ခြင်း)
Broken jaw (မေးရိုးကျိုးခြင်း၊ မေးရိုးပြုတ်ခြင်း) ကဘာလဲ။
မေးရိုးကျိုးတယ်ဆိုတာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ဦးခေါင်းခွံနဲ့အောက်ဘက်ကမေးရိုးကို ဆက်ထားတဲ့ အဆစ်တစ်ခု (သို့) နှစ်ခုလုံးကိုထိခိုက်မိ တာကိုခေါ်တာပါ။
ထိုဆက်ထားသော အဆစ်များမှာ ဟသွား၊ အက်သွားခြင်း (သို့မဟုတ်) ဦးခေါင်းခွံမှ ပြုတ်ထွက်သွားခြင်းတို့ထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ထိုသို့ မေးရိုးဆစ်ပြုတ်ထွက်သွားခြင်းကို မေးရိုးဆစ် လွဲတယ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။
မေးရိုးကျိုးခြင်း၊ အက်ခြင်း (သို့) မေးရိုးပြုတ်ခြင်းတို့ဖြစ်ရင် အစာစား ရခက်တာတွေ၊ အသက်ရှူရခက်တာတွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေ ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ မြန်မြန်သက်သာစေရန် ဆေးကုသမှုချက်ချင်း ခံယူသင့်ပါတယ်။
Broken jaw (မေးရိုးကျိုးခြင်း၊ မေးရိုးပြုတ်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
မေးရိုးကျိုးခြင်းက အရမ်းကို အဖြစ်များပါတယ်။ အမျိုးသားတွေ ထက် အမျိုးသမီးတွေမှာ ပိုအဖြစ်များပီး အသက်အရွယ်မရွေး ဖြစ် နိုင်ပါတယ်။ မေးရိုးကျိုးနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အချက်တွေကို လျော့ချပီး မေးရိုးကျိုးတာကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်သိရှိလိုသည်များအတွက် ဆရာဝန်ဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါ။
Broken jaw (မေးရိုးကျိုးခြင်း၊ မေးရိုးပြုတ်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
သွားနှင့်ခံတွင်းပြဿနာ ဖြစ်ခြင်း (ဥပမာ- သွားဖုံးထုံခြင်း၊ သွားများ နဲ့လာခြင်း)
မေးရိုးကျိုးရင် အရင်ဆုံး နာတာ၊ ရောင်တာ၊ သွေးထွက်တာတွေ ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ မျက်နှာတစ်ခုလုံးရောင်ပီး မေးရိုးက တောင့်နေ၊ နာနေပါမယ်။ ပါးစပ်ထဲကသွေးထွက်နိုင်ပီး အချို့လူတွေမှာ အသက်ရှူရခက်တာတွေ ရှိပါမယ်။ သွေးတွေက အသက်ရှူလမ်း ကြောင်းထဲပိတ်နိုင်ပါတယ်။ အစားဝါးတဲ့အချိန်တွေ၊ စကားပြောတဲ့ အချိန်တွေမှာ အနာဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့ မေးရိုးကျိုးတာ ပြင်းထန်ရင်တော့ မေးရိုးကို သိပ်လှုပ်လို့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါမှမဟုတ် လုံးဝလှုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
မျက်နှာတို့၊ သွားဖုံးတို့မှာ ထုံခြင်း၊ ညိုမဲစွဲခြင်းတို့ဟာ လည်း မေးရိုး ကျိုးရင် ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့အရာတွေပါ။ အဲလိုကျိုးသွားခဲ့ရင် မျက်နှာပုံစံပါ ပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ မေးရိုး(သို့မဟုတ်) မျက်နှာ မှာ ဘုသီးထနေပါလိမ့်မယ်။ မေးရိုးကျိုးတဲ့ ဒဏ်ကြောင့် သွားတွေ နဲ့ တာ၊ ကျွတ်ထွက်တာတို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အထက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့အထဲမှာ မပါဝင်တဲ့ အခြားသော လက္ခဏာတွေလည်း ရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ့်ဆီမှာ ရောဂါလက္ခဏာ တစ်ခုခုများရှိနေမလားဆိုပီး စိုးရိမ်နေရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော လက္ခဏာတွေရှိမယ်ဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် မေးချင်တာတွေရှိမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါ။ လူတစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်ဟာ ခန္ဓါကိုယ်တုံ့ပြန်ပုံချင်းမတူညီကြပါဘူး။ သင့်အခြေအနေအတွက် ဘာကအသင့်တော်ဆုံးလဲဆိုတာ ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းက အကောင်းဆုံးပါပဲ။
Broken jaw (မေးရိုးကျိုးခြင်း၊ မေးရိုးပြုတ်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
မျက်နှာမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းက မေးရိုးကျိုးစေတဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းပါ။ လူတစ်ယောက်ရဲ့မေးရိုးဟာ မေးစေ့ကနေပီး နားရွက်အနောက်ဘက်ထိရှည်လျားပါတယ်။ မေးရိုးကျိုးစေတဲ့ အဖြစ်များတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေကတော့
အိမ်မှာ မတော်တဆ ချော်လဲခြင်း
စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံတို့မှာ မတော်တဆ ထိခိုက်မိခြင်းတို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။
Broken jaw (မေးရိုးကျိုးခြင်း၊ မေးရိုးပြုတ်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
မေးရိုးကျိုးခြင်းကို ဖြစ်နိုင်ချေများစေတဲ့ အချက်တွေ အများကြီးရှိ ပါတယ်။
အများဆုံးကတော့ ယာဉ်မတော်တဆမှုတွေ၊ ယာဉ်တိုက်မှုတွေ ကြောင့် မေးရိုးကျိုးကြတာပါ။ ဒါကြောင့် အကောင်းဆုံးကာကွယ်မှု ကတော့ ကားကို ဂရုစိုက်မောင်းဖို့ လိုပါတယ်။ အားကစားလုပ်တယ်၊ ပြိုင်ပွဲဝင်တယ် ဆိုရင်လည်း ထိခိုက်မှုကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ဝတ်ဆင်သင့်ပါတယ်။ အဲ့အပြင် ချော်လဲနိုင်ခြေများတဲ့ ရောဂါအခြေအနေရှိသူတွေအနေနဲ့လည်း အဲ့ရောဂါတွေကို ကုသမှုခံယူရပါမယ်။ ပြုတ်မကျအောင်၊ ချော်မလဲ အောင် လမ်းညွှန်ချက်တွေကို လိုက်နာရပါမယ်။
Broken jaw (မေးရိုးကျိုးခြင်း၊ မေးရိုးပြုတ်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
မေးရိုးကျိုးခြင်း ရှိ၊ မရှိ ရှာဖို့ ဆရာဝန်က ရောဂါရာဇဝင်မေးခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်းနဲ့ ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပီးဆုံးဖြတ်ပါလိမ့် မယ်။ သာမန်မေးရိုးုကျိုးခြင်းကို ခံတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာခွဲစိတ်ဆရာဝန် (သို့မဟုတ်) သွားဆရာဝန်တို့မှ ကုသပေးနိုင်ပါတယ်။
မေးရိုးကျိုးတာ အရမ်းပြင်းထန်ခဲ့ရင်တော့ မျက်နှာခွဲစိတ်ပြုပြင်တဲ့ အထူးကုဆရာဝန် (သို့မဟုတ်) ဦးခေါင်းနှင့်လည်ပင်းဆိုင်ရာ ခွဲစိတ် ဆရာဝန် (သို့မဟုတ်) ခံတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာခွဲစိတ်ဆရာဝန် တို့ကဲ့သို့ အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများထံမှာ ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
Broken jaw (မေးရိုးကျိုးခြင်း၊ မေးရိုးပြုတ်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ရောဂါပြင်းထန်မှုပေါ်မူတည်၍ မေးရိုးကျိုးတာကို ခွဲစိတ်ကုသဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ အနည်းငယ်သာထိခိုက်မိတာ ဆိုလျှင်တော့ မေးရိုးကို မလှုပ်ရှားဘဲ ငြိမ်အောင် ထိန်းထားနိုင်လျှင် သူ့ဟာသူပြန်ကောင်းသွားနိုင်ပါတယ်။
မေးရိုးရဲ့နေရာ အများကြီးကျိုးသွားခဲ့လျှင်တော့ တစ်ဖက်ကို ချော်ထွက်သွားနိုင်တာမို့ ခွဲစိတ်ကုသဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
မေးရိုးကျိုးခြင်းကို ကာကွယ်ကုသနိုင်စေဖို့ လူနေမှုဘ၀ ပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အိမ်တွင်းဆေးနည်းတွေက ဘာတွေလဲ။
အောက်ပါလူနေမှုဘဝပုံစံပြောင်းလဲခြင်းတွေနဲ့ အိမ်တွင်းဆေးနည်းတွေက မေးရိုးကျိုးခြင်းကို ကာကွယ်ကုသနိုင် စေဖို့ ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ မေးရိုးကျိုးခြင်းမှ ပြန်ကောင်းလာလျှင် အစားကို ပျော့ပျော့ပဲ စားပေးဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ အနည်းငယ်သာထိခိုက်မိတာ ဆိုလျှင်တော့ အရမ်းမာပီးဝါးရခက်တဲ့ အစားအစာတွေကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြင့် သူ့ဟာသူ သက်သာသွားစေနိုင်ပါတယ်။ လတ်ဆတ်သော အသားစိမ်း၊ ငါးစိမ်းများ ၊ ကြာကြာဝါးရသော မုန့်များသည် အားစိုက်၍ဝါးရသောကြောင့် နာကျင်ခြင်းကို ဖြစ်စေပီး ပြန်ကောင်းလာခါစမှာ မစားသင့်ပါ။ အောက်ပါ အစားအသောက် များကတော့ပျော့ပီး ဝါးလို့လွယ်ပါတယ်။
ကောင်းစွာချက်ပြုတ်ထားသော pasta ဂျုံမုန့်
မေးရိုးကို သွပ်နန်းကြိုးများနှင့်ငြိမ်အောင် ထိန်းထားပြီး ကုသမှုခံယူပါက ပို၍ပင် အစားရှောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ပါးစပ်ကို လည်း အဖွင့်အပိတ် မလုပ်နိုင်သောကြောင့် နေ့စဉ်လိုအပ်သည့် ဗီတာမင်များ၊ သတ္တုဓါတ်များ ကို ပိုက်ဖြင့်သာ စုပ်သောက် နိုင်ပါတယ်။ မေးရိုးထိခိုက်သူတို့အတွက် လုံလောက်သည့် စွမ်းအင် ကယ်လိုရီ ရရှိဖို့လည်းမလွယ်ပေ။ နို့၊မလိုင် နဲ့လုပ်တဲ့စားစရာတွေက တော့ ကယ်လိုရီများများရနိုင်ပါတယ်။ သစ်သီးဖျော်ရည်၊ ဟင်းသီး ဟင်းရွက်နဲ့ ကောင်းစွာချက်ထားသော အသားတွေကတော့ ပရိုတင်းနဲ့ ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုတဲ့ တခြားအာဟာရ ဓါတ်တွေရရှိစေပါတယ်။ မုယောစပါး၊ ဂျုံနှင့်အခြား ပျော့ပျောင်း သော ကောက်ပဲသီးနှံများကိုလည်းအဓိက စားနိုင်ပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့ မေးရိုးကုသမှုခံယူနေသည့်အချိန်တွင် စားနေကျထက် အကြိမ်ရေ များများစားသင့်ပါတယ်။ တစ်နေ့ ၃၊၄ ကြိမ်အစား ၆ကြိမ်မှ ၈ကြိမ် လောက်အထိ နည်းနည်းစီ အကြိမ်ရေများများစားသင့်ပါတယ်။ ထိုသို့စားခြင်းဖြင့် လိုအပ်တဲ့ ကယ်လိုရီ ပမာဏကိုရရှိစေ နိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါစားတိုင်းအသီးဖျော်ရည် တစ်မျိုးသောက်ခြင်း ဖြင့် တစ်နေ့ကို ဖျော်ရည်၈မျိုးထိ အရသာရှိစွာ သောက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
လိုအပ်တဲ့ကယ်လိုရီကို ပမာဏကို ရရှိစေရန် နို့နှင့် ဖျော်ရည် ကို လည်း သောက်ရပါမယ်။ ရေ၊ ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည် နှင့် ဆိုဒါတို့ ကို လျှော့သောက်ပါ။ ၎င်းတို့မှာ ကယ်လိုရီမပါလို့ အစားရှောင် နေရတဲ့အချိန်တွေမှာ သောက်ရင် ကိုယ်အလေးချိန် ထိန်းထားနိုင် မှာမဟုတ်ပါ။
အရမ်းမပူသော၊ မအေးသော အစားအသောက်များကို စားသင့်ပါတယ်။ ထိခိုက်မိပီးနောက်သွားများသည် အထိမခံ ဖြစ်နေပီး ပူလွန်း၊ အေးလွန်းပါက နာကျင်စေနိုင်ပါတယ်။ ဗီတာမင် ဓါတ်တွေရရှိဖို့ ကလေးအာဟာရဖြည့်စွက်စာ တွေ စားပေးနိုင်ပါ တယ်။ စွပ်ပြုတ်များ၊ ဖျော်ရည်များ ၊ တစ်ချို့သောအစားအစာများ သည် ပိုက်ဖြင့်စုပ်မသောက်နိုင်လောက်အောင် ပျစ်နေပါက ရေ (သို့မဟုတ်) နွားနို့ နှင့် ရောသောက်နိုင်ပါတယ်။
Broken jaw. https://www.emedicinehealth.com/broken_jaw/page5_em.htm#broken_jaw_risk_factors_and_prevention. Accessed October 23, 2017
Broken jaw. https://www.healthline.com/health/broken-or-dislocated-jaw#diet6. Accessed October 23, 2017